နည်းပညာ • Jun 29, 2020
Manjaro က ဒီနောက်ပိုင်း လူပြောလည်း များလာတယ်၊ အဓိက AUR (Arch User Repository) က package စုံတာတွေ၊ Rolling Release (တရစပ် update) တွေကြောင့် ပြောင်းချင်လာတယ်။ အသိထဲမှာလည်း Manjaro power user တွေ ရှိနေတာကြောင့် သူတို့ ကောင်းမှုနဲ့ နားယဥ်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။ Ubuntu based ဖြစ်တဲ့ Pop!_OS ကို သုံးတုံးက out-of-the-box support တွေ အကုန်နီးပါးရခဲ့တယ်။ ခက်တာက apt နဲ့ tie-in ဖြစ်နေတာပဲ။ တချို့ software တွေ သုံးချင်ပေမယ့် dependency တွေ မကိုက်တာတွေ၊ new release ရဖို့ လနဲ့ချီစောင့်ရတာတွေ မကြိုက်တာနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ကွာဆိုပြီး Manjaro (KDE edition) ကောက်တင်ပလိုက်တာပဲ။
စကားမစပ်: မင်း Arch မသုံးရဲဘူးလားကွဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် အဲ့လောက်စားဖို့ အချိန်မကုန်ချင်တာနဲ့ Expert Linux User မဟုတ်သေးလို့ပါ။ 😅
စစချင်း PC မှာ တင်တုံးက Disk Wipe ပြီးတင်တော့ ဘာမှ dual boot လည်း မရှိ။ KDE ထဲ ဝင်ဝင်ချင်း စက်ကလည်း Windows ထက် သေတော့မလို နှေးနေတော့ ဂွပဲ ငါတော့ မှားပြီဆိုပြီး စိတ်ပူသွားသေးတယ်။ pacman -Syu (system upgrade) လုပ်လိုက်ပြီး ခဏကြာတော့ မောင်မင်းကြီးသားက နည်းနည်းမြန်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမြန်ကြီး မဟုတ်သေးဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ Manjaro Forum တွေ၊ Arch Wiki တွေ မွှေနှောက်ပြီး အချိန် ၁နာရီကြာကြာမှာ ဘာမှမဆိုင်တာ သွားတွေ့တယ်။ Battery Management option ကို ဖြုတ်ချပလိုက်မှ လားလား ပေါ့ရွှတ်သွားသကိုး။ ဘာဆိုင်လည်းတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိ၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်တာက Battery Management က ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် PC မှာ on သွားတော့ ရှိရှိသမျှ system resource တွေ အကုန် လျှော့ပစ်တာနေမယ်။
အဲ့တော့ သုံးလို့ရပြီဆိုတော့ ကျွန်တော် မြင်မြင်ချင်း first impression လေးတွေ ပြောပြပါ့မယ်။
အကြိုက်ဆုံးက KDE Plasma ပဲ။ Ubuntu တို့ ဘာတို့မှာ တင်သုံးလို့ရတာတော့ သိတယ် (စိတ်ဝင်စားရင် Kubuntu ရှိတယ်)။ AUR မရှိတော့ ဖီးကြဲနေတယ် သုံးရတာက။ ပြီးတော့ DE ကိုလည်း ပြိုင်တူ ၃ခုလောက် တင်မသုံးချင်တော့ default KDE ကို တော်တော် အမိုက်စားလုပ်ထားတဲ့ ကောင်ကို အရမ်းသဘောကျတယ်။
တစ်ချိန်က Mac User ပေါက်စနလေး ဖြစ်ခဲ့တော့ Gnome ကို တော်တော်ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကြာလာတော့ Gnome က လေးတိလေးကန်နဲ့ customization ကလည်း အတော်နည်းတယ်လို့ ခံစားမိတာရယ်၊ Gnome နဲ့ Mac (Aqua DE) ရဲ့ UI ကိုက Laptop တွေနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်တယ်လို့ ခံစားမိလို့ KDE နဲ့ ယှဥ်လိုက်ရင် Nvidia ပေါ်က performance က သွက်တယ်၊ Windows မဆန်တဆန်လေး ဖြစ်နေတယ်။ Workspace တွေခွဲသုံးတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့လည်း Workspace တွေ ပေးခွဲသေးတယ်။ Customization အတွက် ပေးထားတဲ့ Setting တွေ Option တွေဆိုတာလည်း ပုံပွနေတာပဲ။ ကိုယ့်အကြိုက် Customization နဲ့ သုံးချင်တဲ့ ကိုယ်တွေနဲ့တော့ အနေတော်ပဲပေါ့။
KDE Plasma ရဲ့ RAM usage ကတော့ 1.5GB ကနေပြီး 2GB ဝန်းကျင်စားပါတယ်။ အစားသက်သာတာ လိုချင်ရင်တော့ XFCE edition ဒေါင်းသုံးပေါ့။
System Settings of Manjaro
စကားမစပ် ဒီထဲက Font နဲ့ Theme တွေက ကျွန်တော် ပြန်ပြောင်းထားတာပါ။ Font က default အနေနဲ့ Noto Mono နဲ့လာတယ်။ ခုသုံးထားတာ Adobe Source Code Pro ပါ။ Theme က Breath2default လာပြီး ခုသုံးထားတာ KDE Monochrome ပါ။ Theme installation ကလည်း Gnome လို tweak tool သုံးစရာမလိုပဲ setting ထဲက တန်းပြောင်းလို့ရတယ်။
Windows မှာဆိုရင် ဟိုဒင်းသွင်းရ ဒီဒင်းသွင်းရနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တယ်။ EXE တွေ ရှာဒေါင်း၊ Double Click နှိပ်၊ ဟိုလှည့်ဒီလှည့်ကို လုံးလုံးမကြိုက်။ Windows App Center ကလည်း Ads တွေချည်းပဲ “git-shit-done” attitude မျိုး မရဘူး။ Mac မှာကတော့ နည်းနည်းလွယ်တယ် App Store လေးနဲ့ အေးဆေး chill ပြီးသွင်းလို့ရတယ် ဒါပေမယ့် App Store ကိုလည်း မကြိုက်လှဘူး။ Brew လေးတော့ ကောင်းပါရဲ့ သူလည်း တစ်ခါတစ်လေ သိပ်တော့ မစုံ။ Windows မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် software လေးတွေဆို ပိုက်ဆံကပေးရ (open source freeware တွေလည်းရှိတယ်၊ Libre လိုကောင်ကြီးတွေကျ ရှိပေမယ့် အချို့ ပုစိညှောက်တောက်လေးတွေဆို pre-compiled binary မရှိပြန်) နဲ့ဆိုတော့ ပိုက်ပိုက်သိပ်အထွက် မခံချင်တဲ့ ကျွန်တော်လို ကောင်မျိုးအတွက်က မကိုက်ပြန်ဘူး။ Crack ဒေါင်းရင်လည်း virus က ကြောက်ရပြန် etc etc… ထားပါ သူများမကောင်းကြောင်း ပြောနေမိပြီ။ AUR နဲ့ Pacman အကြောင်းဆက်ရအောင်။
AUR ဆိုတာ Arch User Repository … သူက Linux World မှာ အကြီးဆုံး Software Center ကြီးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ Ubuntu မှာဆိုရင် .deb ဖိုင်တွေက Windows ရဲ့ .exe နဲ့ တူတူလိုပဲ။ .tar.gz နဲ့ လာတဲ့ကောင်တွေဆို tarball ဖြည်၊ desktop file ကိုယ့်ဟာကို လုပ်ရ၊ symlink ရွေ့ရ ဘာညာနဲ့ အာရုံနည်းနည်းနောက်တယ် (Postman manual သွင်းကြည့်)။ အဲ့တော့ ကြာတော့ ဘာဖြစ်လာလည်းဆိုတော့ .deb နဲ့ သွင်းတဲ့ကောင်တွေက တစ်စု၊ apt နဲ့ကောင်တွေက တစ်စု၊ flatpak တွေနဲ့ သွင်းထားတဲ့ကောင်တွေက တစ်စုနဲ့ ပွထလာကော။ minimal installation လိုချင်တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က မကိုက်ပြန်ဘူး။
AUR မှာတော့ ပိုစုံတယ်။ စုစုစည်းစည်း ပိုရှိတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ pacman (or) yay နဲ့ ရှာ၊ တွေ့ရင် သွင်း၊ မတွေ့ရင် AUR တက်ကြည့်ပြီး သွင်းချင်တဲ့ package / software ကိုရှာ။ မင်း သွင်းချင်တဲ့ဖိုင်က ဘာလဲ rpm လား deb လား။ သူတို့က community က ရေးပေးထားတဲ့ PKGBUILD file တွေ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို သူ့ဟာသူ ဒေါင်းပြီး အကုန်လုပ်သွားလိမ့်မယ်။
ဥပမာ ဒီမှာ ကျွန်တော် Spotify install လုပ်တဲ့ command
အဲ့ ၃ခုနဲ့ Spotify ကို သွင်းလိုက်တယ်။ သူ့ဟာသူ dependency တွေ ရှာသွင်းသွားတယ် ပြီးသွားကော။ ဒါ makepkg နဲ့ သွင်းတာ။ AUR က တိုက်ရိုက်သွင်းချင်တယ်ဆို pacman or yay သုံးလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်က yay ကို သုံးတယ်။
Telegram ကို install လုပ်ချင်တယ်ဆို yay နဲ့ အရင်ရှာလိုက်တယ်
Highlight ပြထားတာက ကျွန်တော်သွင်းချင်တဲ့ Software
ပြီးရင် copy ကူးပြီး
yay -S telegram-desktop-wide လို့ရိုက်လိုက်ရင် တန်းသွင်းရုံပဲ။
ဒါမှမဟုတ်ရင် သူ့ဘေးက ID 72 ကို ရိုက်သွင်းပေးပြီး သွင်းလို့ရတယ်။
အပေါ်က ပုံမှာတော့ telegram-desktop-bin ကို သွင်းထားပြီးသားမလို့ ထပ်မသွင်းတော့ဘူး။
Spotify သွင်းတာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ Just one command to rule them all.
Installing Spotify with yay
ခေါင်းမစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်က Software Center ရှိပါတယ်။
With some pre-installed apps
ကိုယ့်ညီတွေက တယ်ဂိမ်းဆော့ကြတယ်။ အဲ့တော့ သူတို့အတွက်ပါ ဂိမ်းဆော့လို့ရအောင် hassle free လုပ်ပေးထားရတယ်။ ဆော့တဲ့ဂိမ်းတွေကတော့ Counter Strike တို့ Dota2တို့ပဲ များပါတယ်။ သူတို့က Steam Linux Runtime မှာတင် full performance ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းတွေဆိုတော့ ကိစ္စမရှိ။ Manjaro ကို install ပြီး GPU တွေသိတဲ့အထိ တော်တော် ပြင်ရမယ်တောင်ထင်တာ သွင်းသွင်းပြီးချင်း သိတယ်ဆိုတော့ ကိစ္စမရှိတော့ဘူး (ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က non-free Nvidia Driver ကို သုံးထားပါတယ်။ Open Source Driver တွေဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့)။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေ အသေဆော့တာ DOOM (2016) နဲ့ DOOM Eternal (2020) , Shadow of the Tomb Raider (2018) ခင်ဗျ။ ဒါတွေက Pop!_OS ပေါ်မှာ DOOM Eternal ကို ကျွန်တော့် laptop ပေါ်မှာ 60 FPS High Setting နဲ့ အေးဆေးဆော့ခဲ့တယ်။ လောလောဆယ် Manjaro မှာတော့ CS:GO ပဲ စမ်းရသေးတယ်။ Linux Runtime ဆိုတော့ ပေါ့ရွှတ်ဖလပ်နေတာပဲ။
Tick on “Force the use ofaspecific Steam Play” …. and choose Steam Linux Runtime before you play
Linux compatible game တွေကြည့်ချင်ရင် https://www.protondb.com/ မှာ ကြည့်ပါ။
Manjaro သုံးတာ တစ်ပတ်လောက် စမ်းသုံးရင်း သဘောကျသွားတဲ့အတွက် ဒီ article ကို ထရေးပါတယ်။ (ဘယ်နေ့တော့ pacman က ကိုယ့်ကို ဆေးထိုးမလဲ မသိ) သဘောကျလွန်းလို့ ခု Daily Driver laptop မှာ Pop!_OS ကို ဖြုတ်ပြီး Manjaro ကိုပြန်တင်ထားပါတယ်။ သူကကျတော့ စောစောကလို မဟုတ်ဘူးဗျ 4K display နဲ့ Dual GPU (Intel & Nvidia) ဆိုတော့ ဂွကျနေတာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်။ နောက်နေ့ အားရင်တော့ အဆင်ပြေသွားအောင် ဘယ်လို ရှင်းထားလဲဆိုတဲ့ article လေး ဆက်ရေးပါဦးမယ်။
ခုတော့ မနက် ၄နာရီလည်းထိုးပြီဆိုတော့ အိပ်ပါပြီဗျာ။ Bonus အနေနဲ့ အောက်က ပုံလေးမှာ ခု run နေတဲ့ကောင် spec ဖြစ်ပါတယ်။
Original Post - https://medium.com/@kaungmyatlwin/hopping-to-manjaro-linux-497ffe559be8 by Kaung Myat Lwin
Full Stack Developer (Node.js) working @ Expa.AI.